विश्वनाथ खरेल शुक्रवार, जेठ ९, २०७७, ०८:२७:०० मा प्रकाशित
नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो । यहाँको ६६ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या कृषि पेशामा आश्रित रहेका छन् । जसले गर्दा यसै क्षेत्रबाट ३३ प्रतिशत भन्दा बढी कुल ग्राहर्स्थ उत्पादन(जिडिपि) हुने गरेको अनुमान छ । मुलुकको भौगोलिक तथा प्राकृतिक बनावटको स्थितिलाई अवलोकन गर्ने हो भने यहाँ कतै बारै महिना हिउँ नै परि रहने छ भने कतै तापकक्रम बढी रहेको पाइन्छ । जसले उच्च पहाड, पहाडी भेग र समथर तराईमा विभिन्न किसिमका खाद्यान्न बालीनालीहरु, तरकारी, फलफूल, चिया, कफि, रेशम, मासुजन्य, दुधजन्य, पशुजन्य, दलहन, तेलहन आदि लगाउन सक्ने भू–भागहरु रहेको पाइन्छ ।
विगतका केही दशक पहिलेको स्थितिलाई मध्यनजर गर्ने हो भने कृषि पेशालाई हेपिएको पेशाको रुपमा हाम्रो समाजमा स्थापित भएको थियो । तर पछिल्लो दशकमा भने विभिन्न आम सञ्चार माध्यमहरुबाट कृषिलाई हौसला दिने किसिमले विभिन्न पत्रपत्रिकाहरु, रेडियो, टिभी आदिमा कृषिका विविध पक्षहरु प्रकाशित हुँदै आएका छन् । त्यसै कारणले होला हालको नेपाली समाजले पनि कृषिको विकास गर्नु पर्छ भन्ने धारणालाई अगाडि सारेको पाइन्छ । जसले गर्दा कृषि पेशालाई राष्ट्रियस्तरमा नै चासोको विषय बन्न गएको छ । यसमा हाम्रो देशमा हुने विभिन्न दलीय दलहरुले आफ्ना चुनावी नाराको विषय मात्र नभएर अर्थतन्त्रको आधारभूत मेरुदण्डको रुपमा रहेको चर्चा परिचर्चा गर्दै आएको छन् । विगतका दशकमा कृषि क्षेत्रमा जे जति कर्महरु गरिएका थिए त्यसको पनि राम्रो या नराम्रो थियो भन्ने चर्चा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हुन गईरहेको छ ।
पहिले केही दशक अगाडि नेपालबाट अरु मुलुकहरुमा खाद्यान्न लगायत अन्य बस्तुहरुको निर्यात हुने गरेको थियो । हाल आएर आफ्नै मुलुकका जनतालाई खाद्यान्न लगायत तेलहन, दलहन, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु आदि आयात गर्नु पर्ने परिस्थिति सृर्जना भएको छ । जसले गर्दा अबौं रुपियाँको धनराशी विदेशमा जाने गरेको छ । यी कुराबाट पाठ सिक्दै सरकार तथा जनताले पनि कृषि विकासको कर्ममा जुट्नु पर्ने बेला आइपरेको छ । दिनप्रति दिन बढ्दो जनसंख्याको भरण पोषणको लागि कृषि कर्मबाट नै जनताको भोक मेटिने हुँदा यस्ता क्षेत्रहरुको सम्मान गर्नु पर्ने क्षेत्र हो भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै आएको छ । पहिलेका सञ्चार माध्यमहरु कृषि पेशालाई खासै महत्व दिएको थिएन । तर, आजका दिनमा आम सञ्चार माध्यमहरुले कृषिका विभिन्न पक्षहरुलाई बढ्दो रुपमा महत्वपूर्णकासाथ प्राथमिकता दिन थालेका छन् ।
कृषिलाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन नसक्दासम्म कृषिको व्यवसायीकरण र पुँजीवादी विकास गफमै सीमित हुन्छ । अझ पनि जमिन तयार गर्ने, सिँचाइ गर्ने, बीउ रोप्ने, गोडमेल गर्नेदेखि भण्डारणका प्रविधिहरू परम्परागत छन् । यी सबै विषयलाई आधुनिकीकरण गर्दै प्रविधिको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ । यसर्थ जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य क्षेत्र भनेकै कृषि हो ।
जबसम्म कृषिको चौतर्फी विकास हुन सक्दैन तबसम्म देशको भविष्य बन्न नसक्ने कुरामा दुईमत छैन् । कृषि विज्ञहरुको भनाई अनुसार मुलुकको कृषि विकास गर्नको लागि कुल राष्ट्रिय वार्षिक वजेट विनियोजनको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने भन्ने रहेको पाइन्छ । हाम्रा छिमेकी देशहरु चीन र भारतलाई हेर्ने हो भने उनीहरुको कृषि कर्महरुमा सरकारले वजेट देखि लिएर वीउ बिजन, मलखाद, सिचाइ आदिको व्यवस्थापन राम्रो सँग मिलाइ दिएको पाइन्छ । जसले गर्दा प्रति इकाइ उत्पादकत्वमा बृद्धि भएको छ । उनीहरुको खाद्यान्न बालीहरुको राष्ट्रिय उत्पादकत्व ९ देखि १० मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको अनुमान गरिएको छ ।
यसर्थ छिमेकी मुलुकहरुमा उत्पादीत बस्तुहरु सँग हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । यसमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो किन नेपालले प्रति हेक्टर कम उत्पादन गर्नुको कारण के हो भने जीज्ञासा आउँनु स्वभाविकै हो । सरकारको हालको रवैया हेर्ने हो भने आश गर्न सकिने स्थिति नभएको विज्ञहरुको तर्क रहेको पाइन्छ । विज्ञहरुको सुझाव यो पनि छ कि कृषि कर्ममा थोरै कार्य गरी धेरै प्रतिफल उपलब्ध हुन सक्छ । जस्तै कि अहिले धानको उत्पादकत्व पछिल्ला वर्षहरुमा सालाखाला ३ दशमलव ५ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेको अवस्था अनुमान गरिएको छ ।
यो उत्पादकत्वलाई ४ देखि ५ मेट्रिक टन प्रति हेक्टरसम्म पु¥याउन सकियो भने हाम्रो देशमा वर्षेनी अर्वौको चामल आयातको समाचार संचारमाध्यममा पढ्न या सुन्न पर्दैन थियो होला । सरकारलाई कृषिमा लगानी गर्नु बाध्यात्मक नै भएको छ । किनकी आर्थिक समृद्धिको मूल आधार स्तम्भ नै कृषिको चौतर्फी विकास गर्नु हो । यसैको लागि सरकारले अगाडि सारेको मूल नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीले यस किसिमको नारालाई सफल बनाउनको लागि सरकारले सक्दो रुपमा ठोस कार्यक्रमहरु लागु गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यसर्थ सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी पनि नगरेको होइन । तर जति लगानी गरेको छ त्यसको दाँजोमा प्रतिफल भने ज्यादै न्यून मात्र प्राप्त भएको विज्ञहरुले अनुमान गरेका छन् । त्यसै गरी कृषकहरुको गुनासो के छ भने बाली लगाउने समयमा सधैं जसो मलको हाहाकार हुने, वीउ विजन समयमा नपाउने, सिचाइको व्यवस्थापन नहुने, रोगकिराको नियन्त्रणको अभाव आदि गरी धेरै समस्याहरु विद्यमान रहेको छन् । त्यसै गरी संघीय व्यवस्थाको संरचना भएपछि देशमा तीन तहका सरकारहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहेका छन् । जुन स्थानीय स्तरको सरकारको मातहतमा रहेका कृषि विज्ञहरुले कृषकहरुलाई आवश्यक पर्ने सरसल्लाह प्राप्त नभएको जनगुनासो बारम्बार शून्यमा आईरहेको छ । त्यसै गरी कृषि निकायको उच्च स्तरीय तहबाट पनि बेलाबेला गर्नु पर्ने अनुगमन नभएको जस्तो देखिन्छ ।
त्यसै गरी सरकारले कृषि विकासको लागि कृषिका विविध विधाहरुमा दिने अनुदानमा पनि वास्तविक कृषकहरुले नपाउने र राजनीतिक नेताहरुका आसेपासेहरुले पाउने परिपाटीको पनि अन्त्य हुनु पर्छ भन्ने जनगुनासो कृषकहरुले यत्रतत्र गरिरहेको पाइन्छ । त्यसै गरी कृषिको विकास गर्न भनि खटिएका कृषि प्राविधिहरु आफ्नो फिल्डमा नहुनुले बेला बेलामा हुने विभिन्न किसिमको रोगकिराको प्रकोपको साथसाथै अन्य समस्याहरुको लागि अति आवश्यक पर्ने गरेको छ । जसले गर्दा कृषकहरुलाई आवश्यक परेको बेलामा कृषि प्राविधिकहरुको उपस्थिति ओझेलमा पर्ने गरेको छ । हालको स्थानीय तहहरुमा देशभर खुलेका ५१ वटा कृषि ज्ञान केन्द्रहरुले कृषि विकासमा परेका समस्यालाई समाधान गर्ने हेर्तुले स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो कार्य क्षेत्र तोकि दिएको छ ।
कहिलेसम्म हो मेलम्ची पानीको प्रतीक्षा ? शनिवार, जेठ ३, २०७७, ०८:५८:००
कृषि विकास नहुनुको कारण के हो ? शुक्रवार, जेठ ९, २०७७, ०८:२७:००
कोरोनाले प्रमाणित गरेको नमस्कारको महत्व बिहिवार, बैशाख १८, २०७७, ०८:५५:००